Home Wararka Guudlaawe & Qoor Qoor oo ku qanciyay Bashiir Goobe in uu...
[XOG] Guudlaawe & Qoor Qoor oo ku qanciyay Bashiir Goobe in uu ka dhex baxo Rooble & Farmaajo
Faahfaahin dheeraad ah aya laga helayaa sababihii keenay inuu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo uu ka hor yimaado magacaabidda Jen. Bashiir Maxamed Jaamac ee Agaasimaha NISA.
Kulankii koowaad ee Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa heshiis laga gaaray arrintan, kadib markii ay Farmaajo iyo Rooble si kala gaara ula kulmeen Taliyeyaasha ciidamada iyo Guddoomiye ku xigeenka Golaha Shacabka, kadibna kulan guud ay yeesheen Farmaajo iyo Rooble Talaadadii 7 September 2021.
Jen. Bashiir Maxamed Jaamac oo xilka Agaasimaha NISA u magcaabay Ra’iisal wasaare Rooble ayaa kulan gaara la yeeshay Farmaajo iyadoo ka wadahadlay xaaladda NISA iyo sida khilaafka looga saari karo, laakiin waxaa la sheegay inuu Farmaajo isbedelay 24 saacad kadib.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in heshiiskii hore iyo go’aankii Farmaajo la qaatay Rooble iyo Jen. Bashiir Maxamed Jaamac uu meesha ka baxay markii ay shir gaara la yeesheen taliyeyaasha Milateriga iyo Asluubta oo Farmaajo uga digay inuu NISA u dhiibo Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac, waxaa kaloo kulankaasi ku sugnaa Taliyaha Booliska.
Saraakiisha NISA oo ay ku jiraan Fahad Yaasiin iyo C/llaahi Kulane ayaa sidoo kale diiday in Bashiir Goobe Hoggaamiyo hay’adda NISA, taasoo ay ugu wacan tahay awood qeybsiga Beelaha iyo halista ah inuu ogaado arrimo Hay’adda soo maamushay oo qarsoodi ah.
Sida MOL aay xogta ku heshay Fahad Yasin oo laba jeer ka badan la hadlay Bashiir Goobe ayaa ugu danbeyntii ku qanciyay in uu ka gaabsado magacaabistiisa isla markaan ka meer meero in uu tago xarunta NISA.
Bashiir Goobe oo ah shaqsi farabadan ayaa waxaa ku adkaaday in uu labada dhinac mid la safto, waxaana xogta aay sheegeysaa in sidoo kale aay la soo hadleen Guudlaawe & Qoor Qoor oo ku qanciyay in uu ka dhex baxo Rooble iyo Farmaajo.